स्कूल विभागले समृद्धिको खाका दिन सक्छ ?
विश्लेषण : आलेख
भदौ १६, २०७६
अर्थतन्त्र ठीक त्यही बेला डामाडोल हुँदैछ, जुन बेला हामी वामहरू सत्तासिन छौं । रित्तो भकारी, थोत्रो दराज, फुटेको खुत्रुके, बाँजा बारी, रित्ता गाउँ, वृद्ध बाआमा र ससाना लालाबाला रहेको रुग्ण अवस्थाको मुलुकको चाबी बल्लतल्ल हाम्रो हातमा आइपुगेको छ । यसलाइ सकारात्मक रुपमा लिऔं ।
सम्भवतः निभ्न लागेको मुलुकको प्रतिष्ठाको दीयो हामीले नै जोगाउन सक्छौं भन्ने हेतुले यो राष्ट्रको बागडोर हाम्रो हातमा आइपुगेको हुनुपर्छ । यस चुनौतीको सगरमाथालाई हामी अवसरमा बदलौं ।
स्कूल अफ थट संसारकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । तपाईं कुन डाइमेन्सनबाट सोच्नुहुन्छ र सोच्ने डाइमेन्सनलाई कति चाँडो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ? आवश्यकता र आकस्मिकतालाई तपाईं संयोजन गर्न कति खप्पिस हुनुहुन्छ र प्राप्त वस्तुलाई अझ समृद्ध बनाउन तपाईं कति चाँडो मानसिक रुपमा तयार हुनुहुन्छ ? यो नै तपाईंको गतिशिलताको रहस्य हो । यो तपाईंको अध्ययनको शैली, दायरा ,सामाजिक संरचना र अझ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण तपाईंको स्कूल अफ थटसँग सम्बन्धित छ । लाखौं इराकी मारिए, लाखौं लिबियाली बेघरबार छन्, एलप्पो र दमसकसमा उडेका धुवाँका मुस्लाको अवतरण गराउन कति वर्ष पर्खिनुपर्ने हो ? थाह छैन । काबुलको रणमैदानमा मुस्लिमहरू प्रत्येक दिन बलि चढेकै छन्, अस्पतालदेखि पाठशालासम्मको निशानामा नयाँ–नयाँ हातहतियार र बमबारुदको प्रयोग जारी छ तर ती सबै नरसंहार लोकतान्त्रिक स्टिकरमा छन्, त्यसैले ती जायज छन् ।
ग्वान्टनामो वेको चेम्बरमा छट्पटाएका लोकतन्त्र विरोधी हुन् । त्यसैले पनि जायज हो तर तियानमेन स्क्वायर होस् वा अहिलेको हङकङको बखेडा यी लोकतन्त्रमाथिका प्रहार हुन् । यसैलाई भनिन्छ – दृष्टिकोण वा स्कूल अफ थट । हो शव्दहरू पनि निकै महत्त्वका हुन्छन् । मानिसलाई विजयी शव्द जति मनपर्छ, पराजय सुन्दा त्यत्तिकै आक्रोश पैदा हुन्छ । सायद त्यसैले व्याकरणविद्, भाषाविज्ञानका विद्यार्थी, वकिल, मेडिकल तथा टेक्निकल पर्सन सबै पेशा र व्यवसायका मानिस शव्दमा निकै खेल्छन् र शव्द विजयको व्याख्या र पराजयको सहारा दुवैमा प्रयोग हुन्छ । यो कुरा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा पनि देखापर्छ ।
नेकपामा यस पटकको स्कूलिङ विभागको नेतृत्व चयन पनि त्यही शव्दको भय र आवरणको हारजीतसँग केही समय अल्मलियो, सन्देहसहित होस् वा निःसन्देह अब यो एउटा निष्कर्षमा पुग्यो यही प्रारम्भिक सुखद पक्ष हो । जनताको बहुदलीय जनवाद वा २१ औं शताव्दीको जनवाद कुन शव्दलाई हाइलाइट गर्ने भन्ने सोचबाट शुरू भएको स्कूलिङ विभागको विवाद वास्तवमा खुद्रा मसिनो कुरा थियो र नेतृत्वले अन्त्यमा त्यसलाई त्यसरी नै बुझेर यसको टुंगो लगायो ।
अब विभागको आगामी यात्रालाई शुभकामना दिने क्रममा हामीले एउटा कुरामा पूरै ध्यान कहाँ दिनुपर्छ भने दायाँ वा बायाँ कहीँकतैबाट पनि आउने साँघुरा सोचबाट निर्देशित गरिने स्कूलिङले नेपाली समाजको चरित्र चित्रण र त्यसको न्यायोचित सम्बोधनका लागि अन्वेषण गर्दैन । त्यसैले चेसको गोटीझैं जबज र २१ औं शताव्दीको जनवादलाई प्रतियोगिताको शैलीमा चाल नचल्ने कुरामा सम्पूर्ण पंक्ति तयार हुनुपर्छ । पार्टी संगठन, विभाग र सबै जिम्मेवारी बाँडफाँट पछि स्कूलिङ सर्वाधिक महत्त्वको हुनेछ । यो हाम्रा लागि ठीक समय हो ।
अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी स्कूलिङ विभागले आफ्ना पाठ्यक्रम तयार पारोस्, ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, म्यानुफ्याक्चरिङकालीन राजनीतिक अर्थशास्त्र, युरो कम्युनिज्मको वर्ग समन्वय, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, र सहअस्तित्वको हुबहु सर्कुलेसनजस्ता विषयबाट यो माथि उठ्नुपर्छ । स्कूलिङलाई व्यावहारिक बनाऔं, कार्यकर्तालाई महिनामा कम्तीमा ४ दिन ज्यामी बनाऔं । पार्टीको श्रम बैंक खडा गरौं । हरेक प्रदेशमा कृषि विशेषज्ञको निगरानीमा जमिन लिजमा लिएर विशाल एग्रो फर्म खडा गरौं । यसरी कृषि उपज निर्यातको बाटो खोल्ने चेष्टा गरौं । शिक्षाका लागि सरकारी स्कूललाई संस्कृत, नेपाली र अंग्रेजी ३ वटै भाषाको दक्ष बनाउने गरी एउटा स्कूल अफ थटको शुरूवात गरौं ।
सरकारी पाठशाला र विश्वविद्यालयलाई दैनिक जीवन धान्न, व्यापार व्यवसाय र विभिन्न पेशामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यावहारिक र वैज्ञानिक गुरुकूल पद्धतिमा बदलौं । यसले शिक्षामा बगेको पैसाको ज्वारभाँटा नियन्त्रण गर्नेछ । जडीबुटी र वनस्पतिमा पाइने सबैखाले तत्वको पहिचान गरी अत्याधुनिक आयुर्वेद उपचार पद्धति बनाऔं, यसले स्वास्थ्यमा बगेको पैसालाई थेग्ने छ । मेची महाकालीका कपास फर्मलाई सक्रिय बनाऔं, त्यसले लत्ता कपडाको आयात घटाउन मद्दत गर्ने छ ।
ठूला र विद्युतीय गाडी प्रयोगको प्रचलन शुरू गरौं, त्यसले तेल र अटो क्षेत्रको नोक्सानी नियन्त्रण गर्र्नेछ । ४ वटा वेद, महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता, मन्धुम र त्रिपिटक जस्ता धार्मिक र पौराणिक ग्रन्थलाई अन्वेषणको प्रयोगशालामा राखौं, तिनका ज्ञान, अनुभव, तिनले सिकाउन खोजेको पूर्वको तत्कालीन समृद्ध मानव समाजको अध्ययन र अनुसन्धान गरौं । एक चोटी हिमालय पर्वतको यस स्वर्ण छानोबाटो ऋषिमुनि र मानव सभ्यताका अनुभवलाई मानव जीवनको धरातलीय यथार्थमा बदल्ने वुद्धिमतापूर्ण जोखिम उठाऔं, जसलाई आजभोलि एसियाली दर्शनको बृहत् आयामका रुपमा हेरिन थालिएको छ ।
नैतिक मूल्यको महत्त्वलाई जागृत गरौं । हाम्रा सामु यस युगकै चुनौतीपूर्ण प्रश्नहरू छन्, पेटमा बोसो भरिएका, महलको माथिल्ला तलाबाट लालसलाम कमरेड भन्दै विलासिताको जिन्दगीमा मस्त कम्युनिस्ट कार्यकर्ता देश बदल्न सक्छन् ? हामीले आलोचकको यस यक्ष प्रश्नको जवाफ व्यवहारद्वारा दिन सक्नुपर्छ ।
के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता अध्ययन, उत्पादन, उत्खनन् र आविष्कारका क्षेत्रमा हरेक महिनाका २, ४ दिन स्वयंसेवी बन्न सक्छन् ? के कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको पहल र नेतृत्वले सबै प्रदेश खाद्य सम्प्रभूताको ग्यारेण्टी गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्नसक्छन् ? सात समुन्द्र पारिको नयाँ औषधिको प्रयोगशाला बन्नुभन्दा आफैं परीक्षणको शुरूवात गरौं, विशेषगरी वनस्पति र विभिन्न सम्पदाहरुलाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्ने दृढ संकल्प गरौं । के यस्ता कार्यहरू हामी वामपन्थीबाट सम्भव छ ?
भूमिगत राजनीतिक जीवन र जेलका कठोर यातनालाई पाठशालामा बदल्नुपर्छ भन्ने हाम्रा आदर्शको १० प्रतिशत सोचलाई मात्रै पुनर्जीवित गर्न सकिए मुलुक हाम्रै हातबाट समृद्ध बन्छ । अबको स्कूलिङ विभाग युनानी चिन्तक र माक्र्स, लेनिन, कान्ट, जोनलक जस्ता पश्चिमा चिन्तकमाथि मात्रै केन्द्रीत हुनु हुँदैन । यसले पूर्वीय दर्शन, विचारधारा, जीवनपद्धति, रहनसहन र सम्पदामाथि पनि आफ्ना अन्वेषणलाई केन्द्रीत गर्नुपर्छ । आजको समाजको सामाजिक चरित्रमा आएका फेरबदल र सो अनुरुप गर्नुपर्ने कार्यको सूची तयार गरी राष्ट्रलाई समृद्ध तुल्याउन स्कूलिङ विभाग केन्द्रीत रहनुपर्छ ।
अध्यात्मवाद र भौतिकवाद अनि पूँजीवाद र समाजवादको सैद्धान्तिक अन्तरमा लामा–लामा भाषणले मात्रै समाजलाई न्याय र समानता दिन सकिँदैन । व्यावहारिक रुपमा मुलुकलाई पूँजीवादबाट सचेत र योजनावद्ध पहलकदमीद्वारा समाजवादतर्फ संक्रमण गराउन शव्दको लडाइँ तथा विश्वासपात्रलाई सर्वज्ञानी ठान्दा ‘माछो खोज्दा सर्प हात लाग्न सक्छ’ भन्ने ख्याल गर्दै अध्ययन, उत्पादन, अनुसन्धान र आविष्कारमा जोड दिनैपर्छ ।
समाज आफैंमा बृहत् प्रयोगशाला हो । आउनुस् अबका २ दशक पूर्वीय दर्शन र हाम्रा सम्पदातर्फ फर्काैं । यदि त्यस अवधिभित्र हामीलाई सफलताको सम्भावना देखा परे थप अगाडि बढौं, यदि त्यसमा निराशा हात लागे वर्तमानका विश्वव्यापी मानक, सत्यतथ्य र मान्यतासँग पनि त हाम्रो सम्बन्धविच्छेद हुने छैन अनि अप्ठ्यारो कहाँ पर्छ र ? तर एकचोटी हामीले शाहस गरौं कि यहाँको माटो, वनस्पति, सभ्यता, संस्कृत भाषा, गुरुकूल पद्धति यिनीहरूलाई पुनर्जीवन दिऔं । पुष्पक विमान र ब्रह्मास्त्रका हजारौं वर्ष पुराना कथा यदि परिकल्पना मात्रै हुन् भने पनि ती सामान्य परिकल्पना थिएनन्, त्यसो भए वास्तवमा ती के थिए त ?
सत्यताको नजिक थिए वा काल्पनिक ? एनिमेसन र परिकल्पना मात्रै पनि सानो सम्पत्ति होइन, जब परिकल्पनाको स्क्याच तयार हुन्छ, मान्छे त्यसलाई वास्तविकतामा बदल्न आफ्ना सबै प्रयास अघि बढाउँछ । त्यसैले तिनलाई प्रयोगशालामा हालेर कम्तीमा हाम्रा जिज्ञासा मेटाऔं । यदि हामी यस बाटोबाट सफलतामा पुग्न सक्यौं भने समृद्धिका लागि योगदान पुर्‍याउने श्रेय हाम्रो हातमा पुग्न सक्छ र समाजले हामीलाई सम्झिरहने छ ।
पूर्वीय दर्शन, विचारधारा, जीवन पद्धति, ज्ञानविज्ञान कमजोर त थिएन तर पनि साधनालाई अझ बढी विकसित र परिष्कृत गर्न दुःख गर्नुभन्दा साधकलाई नै भगवान् घोषणा गरिदिँदा र उसका साधनालाई दैवी चमत्कारका रुपमा व्याख्या गरिदिँदा यस्ता खोज अनुसन्धानको झन्झट व्यहोर्नु पर्दैन भन्ने चिन्तनले नै आज पूर्व आविष्कारका प्रयासबाट टाढा रहन पुग्यो । जसले यसै दर्शनबाट सिके उनीहरूले नै हामीलाई विकसित रुपमा ती दर्शनका नयाँ भर्सन हातमा थमाए, हामीसँग विकल्प थिएन, हामी त्यतैपट्टि लाग्यौं । फेरि एकचोटी इतिहासको दराजमा धमिरो लागेका सन्दर्भ सामग्रीलाई प्रयोगशालामा हालौं ।
भदौ १६, २०७६ मा प्रकाशित
वामपन्थी राजनीतिमा कलम चलाउने न्यौपाने प्रेस संगठन निकट पत्रकार हुन् ।
निजामती सेवामा ‘दुःखद् ह्याट्रिक’ : दुर्गममा सेवारत राष्ट्रसेवकलाई किन देख्दैन सरकार ?
चीनको ओत लाग्न खोजेका प्रचण्डलाई आएको अमेरिकी सन्देश
बीपीका केही महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक पक्ष
बुवाविनाको नागरिकता विवादको भूमरीमा
मानिसहरू भन्न थाले– माखो मार्न नसक्ने सरकारले लामखुट्टे कसरी मार्छ ?
पूर्व प्रशासकको अनुभव : करोडौं बजेट घोटाला गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै दबाब दिन्थे !
गाला हेरेरै थाहा हुन्छ स्वभाव, कसरी ? हुन त सबैले मुस्कुराएको राम्रै देखिन्छ तर अझ महिलाले मुस्कान छोडेको चाहिँ गजबै देखिन्छ । प्रसन्न हुँदा महिलाको गालामा लालिमा आउँछ र छालामा एकखाले चमक देखिन्छ । गाला हेरेर कुन महिला कस्ती...
स्मार्टफोन मानव स्वास्थ्यका लागि घातक, प्रयोगकर्ताको आयू घट्ने
मानिसको शरीरभित्र हुन्छ यस्तो अलौकिक शक्ति
संसद निलम्बनबारे बेलायती सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार निर्णय गर्ने
बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता नगरे कारवाही
मूर्ति सेलाउन गएका मुस्लिम युवाको शव चार दिनपछि फेला